Ithegi: iintsingiselo zeshishini kwi-ecommerce | Martech Zone
Ithegi: ushishino lweendlela zorhwebo
Impembelelo yobhubhane ngokuqinisekileyo ibenze bobabini abaphumeleleyo kunye nabaphumeleleyo kulo nyaka. Ngelixa abathengisi abancinci benyanzelwe ukuba bavale iingcango zabo, abathengi babenexhala malunga ne-COVID-19 babeqhutywa kuku-odola kwi-intanethi okanye batyelele umthengisi webhokisi enkulu. Ubhubhane kunye nezithintelo zikarhulumente ezinxulumene nazo ziphazamise ishishini liphela kwaye sinokubona iziphumo ezibi kwiminyaka ezayo. Ubhubhane ukhawulezisa isimilo sokuziphatha kwabathengi. Abathengi abaninzi babethandabuza kwaye baqhubeka ukuthandabuza